Otú nyefee Data si iOS Devices ka Android ekwentị mkpanaaka na
Nkebi nke 1: iOS VS Android
iOS na-agba ọsọ nanị na Apple ngwaọrụ dị ka iPhones, iPads, iPods aka. Ọhụrụ version bụ iOS 8.3 wepụtara na April 2015. Android sistemụ na-mepụtara dị ka na-emeghe isi site Open handset Alliance, a GROUP 84 Companies gụnyere Google, Dell, HTC, Sony, Motorola, Samsung. Ọhụrụ version nke Android na-5.1 wepụtara na March 2015.
Anyị ga na-ewetara gị atụmatụ maka ma na-arụ ọrụ na usoro na ka ị na-ekpebi nke ị chọrọ iji na uru na ọghọm echiche dabere na gị mkpa na e ji mara na ị na-achọ na otu sistemụ.
Atụmatụ iOS Android
Company Apple, Inc Open handset Alliance / Google
Ọhụrụ version 8.3 wepụtara na April, 2015 5.1 wepụtara na March, 2015
Multi-ọrụ Ọ dịghị 4.2+
Ikuku usoro mmelite 5+ Ee
Market òkè 15,0 percent 81,2 percent
Chọọ multiple esịtidem ngwa ozugbo Ee Ee
Chọọ niile ubi nke esịtidem akpọkwa 6+ Naanị search Ndi ana-akpo aha ubi, ma ọ bụghị ihe ọ bụla ọzọ ubi
Nzuzo nke mmekọrịta Mgbe mmekọrịta na mpaghara na-adịghị eji iCloud (nke na-data unencrypted) Agaghị ekwe omume ebe ọ bụ na e nwere nanị Google mmekọrịta (nke na-data unencrypted)
Mmekọrịta ka ígwé ojii nkwurịta okwu izo ya ezo Ee 2.3.4+
Desktọpụ mmekọrịta Ee Ọ dịghị
Obodo zuru ndabere Ee, na-eji mpụga kọmputa Limited ndabere maka 4.0+ iji mpụga kọmputa. Omume na 3rd otu ngwa ọdịnala na gbanye mgbọrọgwụ igwe ma ọ bụ a omenala mgbake
Kpọtụrụ iche iche 3rd otu software 4+ ma ọ bụ 3rd otu software
Adreesị ejikọta map Ee Ndi ana-akpo, ma ọ bụghị na Kalinda ma ọ bụ na Gmail
Isi dị nchọgharị Safari, Chrome maka iOS, Opera Mini Chrome maka Android, Firefox
Oku teepu Gbochie site OS mgbochi, ma omume na 3rd otu software na jailbroken ngwaọrụ Gbochie site OS mgbochi, ma omume na 3rd otu femụwe
Bugharịa ngwa ọdịnala na mpụga nchekwa Ọ dịghị 2.2+
Part 2. Easy ngwọta: 1 Pịa nyefee data si iOS ka Android
Wondershare MobileTrans Ọ na-eji maka ebufe data site na ekwentị gaa na ekwentị ọzọ dị ka ozi, kọntaktị, oku na ndekọ, kalenda, photos, music, video na ngwa. Ọzọkwa ị pụrụ ndabere gị iPhone na chekwaa data na PC gị na ihe atụ, ma weghachi mgbe na ị chọrọ. Ihu ọma gị niile dị mkpa data nwere ike zigara ngwa ngwa si ​​a ekwentị na ngwaọrụ ọzọ. The iPhones-akwado site na Wondershare Mobile Trans bụ iPhone 6s (Plus), iPhone 6 (Plus), iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4S. Ọzọkwa, ọ na-akwado na iPad, iPODs aka.
Na Wondershare MobileTrans, ị nwere ike nyefee niile data na ị chọrọ ka kọntaktị, foto, ozi, songs, videos si gị iPhone gị Acer ekwentị. Iji n'ihu, akpa ị ga-jikọọ na ngwaọrụ gị na kọmputa. N'ezie, ebe a bụ niile ngwaọrụ na ngwá ọrụ na-mkpa ka ị nyefee ihe data site na nke a usoro: gị iPhone, gị Acer ekwentị, gị na kọmputa na Wondershare Mobile Trans ngwá ọrụ. Site na isoro usoro si n'okpuru, ị ga-enwe ike nyefee gị niile data site na otu ekwentị gaa na ekwentị ọzọ.
Ọ bụrụ na ị na-adịghị mere a ndabere maka gị iPhone na-azọpụta gị iCloud akaụntụ, ugbu a ọ bụ oge ime ya. N'ihi na nke a karịsịa bụrụ na ị ga-mkpa azụ si iCloud, gị gam akporo ngwaọrụ na Wondershare MobileTrans ngwá ọrụ. I kwesịrị ịma na i nwere ike iji usoro a nanị ma ọ bụrụ na ị nwere iPhone na iOS 6, iOS 7, iOS 8, iOS 9 na ihe gam akporo ngwaọrụ na-agba ọsọ ma ọ bụ mgbe e mesịrị 4.2 nsụgharị nke android sistemụ.
Nzọụkwụ 1. Open Wondershare MobileTrans na họrọ Weghachi si iCloud ndabere mode
Iji n'ihu, ị mkpa na-emeghe Wondershare na gị iCloud akaụntụ mgbe ị na-ahọrọ mode Weghachi si iCloud ndabere. Nzọụkwụ ọzọ ọ bụ nbanye gị iCloud akaụntụ ebe ị pụrụ ịhụ niile backups meere gị iPhone.
Ị ga-enwe ike ịhọrọ ọdịnaya na ị chọrọ iji weghachi, dị ka ana-akpo, ederede ozi, ngwa ọdịnala, Photos na ọtụtụ ndị ọzọ ihe. Ihu ọma niile i zọpụta na azụ elu.
Nzọụkwụ 2. Download iCloud ndabere na ị chọrọ nyefee na gị android ngwaọrụ
N'oge dum usoro, ị ga-enwe a kwesịrị ekwesị netwọk njikọ na iji zere slowing ma ọ bụ ọbụna ịkwụsị data nyefe. Họrọ gị iCloud ndabere na ndepụta na-amalite na ibudata ya.
Nbudata nke gị iCloud ndabere na-amalite na ngwa ngwa ma i kwesịrị ichere a obere oge ruo mgbe usoro a ọ na-eme.
Nzọụkwụ 3. nyefee gị ọdịnaya site iCloud gị Android ngwaọrụ
Mkpa ka ị jikọọ gị ebe Android ngwaọrụ mgbe nbudata na-okokụre. Ị ga-ahụ gị niile ọdịnaya na ị nwere ike ịlele ihe na ị chọrọ iji weghachi na gị android ngwaọrụ. The Final nzọụkwụ ọ bụ na-pịa Malite Copy bọtịnụ.
Part 3. Nghoputa: Ị bụ onye iOS ma ọ bụ Android ọrụ?
> Resource> iOS> otú nyefee Data si iOS Devices ka Android ekwentị mkpanaaka na